Lahateny fampiombonana ho an’ny 60 taona ho avy: nankasitraka ireo mpitondra nifandimby ny filoha Rajoelina | NewsMada
Lahateny fampiombonana ho an’ny 60 taona ho avy: nankasitraka ireo mpitondra nifandimby ny filoha Rajoelina
Par Taratra sur 27/06/2020
Tsotra nefa mendrika ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena tetsy Analakely, omaly. Manampy izany lahaten’ny filoha Rajoelina Andry ho amin’ny fampiraisana sy fampiombonana hiatrehana ny 60 taona vaovao indray. Nisongadina ny nankasitrahany ireo mpitondra rehetra nifanesy, hatramin’ny niverenan’ny Fahaleovantena noho mankaty. « Tsy mora ny niainana tao anatin’ny 60 taona na maro aza ny ezaka nataon’reo mpitondra teo aloha. Tsy haiko ny tsy hisaotra azy ireo. Nanao ny azony natao ary nitondra ny anjara biriky teto amin’ity firenena ity… », hoy. Natsidiny sahady koa anefa fa tsy maintsy hiposaka ny anjara masoandron’ity firenena ity.
Hanoratana tantara vaovao
Nampanantena ny tenany fa hisandratra manomboka izao i Madagasikara. Nanteriny tamin’izany fa efa nasehontsika ny fanovana ka tonga ny fotoana hanoratana tantara vaovao, araka ny fanamby. « Ho sangany i Madagasikara… Ampy izay ny fampisaraham-bazana sy ny fifaminganana… Azo atao ny manangana Madagasikara ho reharahan’ny Malagasy », hoy izy. Niaiky anefa ny tenany fa tsy ho tanteraka izany raha tsy misy ny fanovana fomba fisainana sy fijery ary fomba fiasa. Notsindriny fa miatrika ady vaovao isika nefa matoky fa handresy ny fahavalo rehetra. Anisan’izany ny ady amin’ny aretina, fahantrana, fizarazarana… Handresy ny fifampizarazarana.
Fahaleovantena amin’ny lafiny rehetra
Mila miray hina isika mba tena hahaleo tena marina, araka ny nambarany. Nanao antso avo ny tenany mba hijoroana sy hitsanganana, amin’izao hiatrehana ny 60 taona ho avy izao. « Hiara- kientana sy hiray saina satria tanindrazana iraisana ity ary ho avy iombonana no harafitra manomboka izao ka hanana fahaleovantana eo amin’ny fiandrianam-pirenena, toekarena, sakafo, fahasalamana… », hoy ihany izy.
Nialoha izany, notsiahiviny ny tantara nidiran’ny mpanjanaka teto. Ny tolona niadiana ho an’ny fahaleovantana sy ny nanaovan’ny Foloalindahy matso teo Analakely tamin’ny fotoan’androny ka namerenena izany indray, omaly.